MIALY RAJOELINA TANY AMBILOBE : Hitsangana mialoha ny faran’ny taona ny orinasa mpamokatra “éthanol”
Tafapetraka ny vatofototra hananganana ny orinasa mpamokatra “éthanol” ao Ambilobe. Ny vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina no nametraka izany tamin’ny anaran’ny fikambanana “Fitia” izay tarihiny. Tombanana ho vita hatramin’ny volana desambra ny fotodrafitrasa. 7 mars 2019
Naresaka ny tao an-tampon-tanànan’Ambilobe omaly. Nigadona tany an-toerana ny vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina. Ny tenany no nametraka tamin’ny fomba ofisialy ny vatofototra ho fanombohana ny fananganana ilay ozinina lehibe hamokatra “éthanol” eto Madagasikara.
“Malagasy ethanol” no anarana nomena ilay ozinina, manomboka avy hatrany ny asa fananganana ary tombanana amin’ny 8 desambra ho avy izao ny fahavitan’ny fotodrafitrasa. Fantatra fa manodidina ny iray alina hekitara isan-taona ny ala tsy maintsy kapaina mba havadika ho arina fandrehitra hampiasain’ny isan-tokantrano. Iaraha-mahalala anefa fa mahatonga ny aretin’ny taovam-pisefoana ny fampiasana ny arina fandrehitra ao an-tokantrano, ankoatra ny fahasimban’ny tontolo iainana aterany.
Manoloana ireo no nahatongan-dRamatoa Mialy Rajoelina namolavola ny tetikasa “éthanol” izay nahavoafidy azy ho filohan’ny fikambanana Paesfa. Mba hiarovana ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fampihenana ny fitrandrahana ala eto amintsika dia hampiroboroboina ny famokarana ny vokatra “éthanol” hanoloana ny arina fandrehitra.
Any Ambilobe no hisantarana ny fanorenana ny ozinina mpamokatra “ethanol”, ity farany dia tafiditra ao anatin’ ireo velirano nifanaovan’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka Malagasy. Ankoatr’izay hatsangana miaraka amin’ity ozinina ity ihany koa ny “pepinière” hambolena fary ahafahana mampihodina ara-dalàna ny famokarana. Vokatra “ethanol” hatrany amin’ny 4 000 litatra isan’andro no hivoaka amin’ity ozinina ity ary fary milanja manodidina ny 50 000 kilao no ilaina amin’ izany.
Hiteraka asa ho an’ny tanora
Marihina fa amin’ny fanombohana ihany no hitazonana ireo antontan’isa ireo ary heverina hiakatra io miankina amin’ny filàn’ny mponina.
Hatreto tsy mbola nisy raraka an-tany ny fampanantenana nataon’ny Filoha, Andry Rajoelina. Mitana ny teny nomeny ny Filoha mivady tamin’ ireo karazana fampanantenana nataony nandritra ny andron’ny fampielezan-kevitra. Hitsangana afaka volana maromaro ny orinasa mpamokatra “ethanol” any Ambilobe izay nambaran’ny vadin’ny Filoha tamin’ireo vahoaka tao an-toerana tamin’izany fa “eto aminareo no hananganana an’io ozinina mpamokatra ethanol io”. Ankoatra izay, nambaran’ny Filoham-pirenena ihany koa tamin’izany fa hitondra fampananan’asa ho an’ny tanora ny tenany. Tanteraka izany amin’ity tetikasa lehibe hatsangana ao Ambilobe ity.
Manomboka amin’ny asa fanorenana hatramin’ny fampihodinana ny ozinina dia heverina ho olona tsy latsaky ny 500 no hahita asa amin’izany. Tsy vitan’izany fa hiteraka lalam-barotra ho an’ireo mpamboly fary ihany koa ny fisian’ity orinasa ity. Nambaran’ ny solontenan’ny mpamboly fary any an-toerana fa misedra olana amin’ny orinasa Sucoma izy ireo. Voalaza ho nihena hatrany amin’ny 15% ny andraisan’ity farany ny vokatra fary izay tsy mifanaraka amin’ny fahasahiranan’ireo tantsaha mpamboly akory.
“Maro loatra ny tanora izahay tsy an’ asa, manantena izahay fa hahazo ny anjaranay manoloana ity orinasa ity”, hoy ny solontenan’ireo mpamboly fary. Rehefa tafatsangana ny orinasa dia manana safidy roa izy ireo na handefa ny vokatra any amin’ny orinasa Sucoma na handefa izany ao amin’ ny ozinina Malagasy ethanol, izay nambaran’ireo mpamboly fa tena mahavelom-bolo azy ireo tanteraka.
Tamin’ny omaly dia nosantarina tao Ambilobe ny fivarotana fatana amin’ny vidiny iray alina Ariary miaraka amin’ny “ethanol” iray litatra maimaim-poana. Nisy ireo olona nomena izany maimaim-poana ho fanampiana azy ireo. Tamin’io fotoana io ihan koa no nitokanan-dRamatoa Mialy Rajoelina ny toeram-pivarotana ny vokatra hovokarina amin’ny alalan’ity ozinina vao hatsangana ity.
“Marisika tanteraka ny mponina eto Ambilobe amin’ny fampiasana ny “ethanol” na dia zava-baovao amin’izy ireo aza izany, nanaporofo izany ny filaharam-be tamin’ny fividianana ilay fatana”, hoy ny ben’ny tananan’ Ambilobe.